China MATT PP FILM-200 ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta ihe |Shawi
Koodu mpaghara:: DP-P001
Aha: Matt PP ihe nkiri-200
Ink: agba agba
Nke a bụ ihe nkiri polypropylene na-acha ọcha 200mic maka ibipụta inkjet agba na pigmenti.Ihe nkiri polypropylene a nwere ezigbo mmiri na mgbochi mmiri.Ọ mara mma matte, mkpuchi elu na-acha ọcha na-enye ya ike ịmụpụta ọgaranya, agba ziri ezi.Emebere ya ka ọ dị larịị na ịdị ọkụ, ọ bụ ọkọlọtọ akwụkwọ mmado dị mma maka mpịakọta, ihe ngosi ọkọlọtọ X na igbe mpịakọta mpịakọta.Aha ngwaahịa: Nyefee ihe ngosi matte mkpuchi inkjet ebipụta Polypropylene Film Base Material olypropylene Film Surface finish :Matte Hardness:...
Nke a bụ ihe nkiri polypropylene na-acha ọcha 200mic maka ibipụta inkjet agba na pigmenti.Ihe nkiri polypropylene a nwere ezigbo mmiri na mgbochi mmiri.Ọ mara mma matte, mkpuchi elu na-acha ọcha na-enye ya ike ịmụpụta ọgaranya, agba ziri ezi.Emebere ya ka ọ dị larịị na ịdị ọkụ, ọ bụ ọkọlọtọ akwụkwọ mmado dị mma maka mpịakọta, ihe ngosi ọkọlọtọ X na igbe mpịakọta mpịakọta.
Aha ngwaahịa: Nyefee ihe nkiri matte mkpuchi inkjet ebipụta Polypropylene ihe nkiri
Isi ihe ihe nkiri olypropylene
Mmecha elu: Matt
Obosara mpịakọta: 36 ", 42", 50", 60" (0.914/1.07/1.27/1.52m)
Ogologo mpịakọta: 164ft (50m)
Ink ị, pigmenti
Ogologo oge: 1 afọ
Ebe Mmalite: Jiaxing, China
Iru mmiri nchekwa: Okpomọkụ nchekwa dị mma 60°F ruo 77°F (15°C ruo 25°C) yana iru mmiri 50% na ngwugwu mbụ.
Q6: Ị nwere ike ịnakwere OEM?
• Ee n'ezie.Mpempe akwụkwọ akara na katọn, a na-anabata akara ntọhapụ.
Q7.Kedu usoro mbupu gị?
Q8.Kedu usoro ịkwụ ụgwọ gị?
• T/T, L/C, Paypal, Western Union, Trade nkwa, DP, wdg…
Q9: Enweghị ike ịchọta azịza ya
• Biko email anyị n'efu anyị ga-agbalị inyere aka.Email:info@shaweidigital.com
Nke gara aga: AKWỤKWỌ ọkọlọtọ n'èzí
Osote: MagnetIC PP-ECO
PE film plastic transperent PET mgbochi fog doro anya ...
Gosipụta Props Series
High mma aluminum retractable mpịakọta elu bann ...
Kenkowaputa matt polypropylene PP sịntetik akwụkwọ PP ...